Nyaanni sadarkaa hedduu keessa darbee qophaa'u umurii namaa gabaabsa: Qorattoota - BBC News Afaan Oromoo
Nyaanni sadarkaa hedduu keessa darbee qophaa'u umurii namaa gabaabsa: Qorattoota
Sooranni warshaalee keessatti gulantaa hedduu keessa darbee fi halluun hedduu itti daramee hojjetamu umurii namaa akka gabaasuu fi fayyummaa namaarratti dhiibbaa akka qabu qorattoonni beeksisan.
Qorattoonni akka fakkeenyaatti foon lukkuu, ice cream fi soorata ciree ganamaa irratti soorataman kanneen yeroo dheeraaf bilcheeffaman, halluun itti dabalamuu fi warshaa keessatti gulantaa hedduu keessa darbanii ba'an irrattidha kan qorannoo geggeessan.
Qorattoonni Firaansi fi Ispeen sooranni haala kanaan qophaa'u yeroo ammaa kana baay'inaan sooratamaa jira jedhu.
Nyaanni ayiranii gahaa argachuuf gargaaran kam fa'i?
Nyaanni soorannu waa'ee keenyaa kan himan qabuu?
Qorannoon isaanii miidhaa qaqqabu maal akka ta'e ifatti adda baasee hin himu, garuu namoonni soorata akkasii sooratan humnaa ol waan nyaataniif rakkoo fayyaaf saaxilamuu ibsaniiru.
Qorattoonni kunneen akeekkachiisa kaa'aniiru, qorannoon itti fufiinsa akka gaggeeffamuuf daandii saaqaniiru.
Soorata akkanaa soorachuurra kanneen haalaan warshaalee keessa hin turree fi qabiyyee isa uumamaa of keessaa hin fixne soorachuun fayyummaa namaaf barbaachisaa ta'uus eeran.
Sooranni dhalli namaa sooratu sona itti dabaluuf jecha hanga inni qabiyyee uumamaa fixatutti warshaalee keessa tursiifamnaan yookiin ammoo sona gosa shanii ol itti daballaan fayyaa namaaf miidhaa qaba jedhu qorattoonni.
Goodayyaa suuraa Gosa daabboo
Qorannoo jalqabaa biyya Ispeen Yuunivarsitii Navaaraa keessatti namoota 19,899 irratti waggoota kudhaniif gaggeeffameen yeroo turtii qorannoo sanaa keessatti namoota kanneen keessaa 335 du'aniiru.
Namoonni du'an hedduun isaanii soorata warshaalee keessatti yeroo hedduuf bilchaatee fi kanneen qabiyyeewwan hedduun itti dabalaman warra soorataniidha.
Yuuniversitii oof Paaris keessatti qorannoon namoota 105,159 irratti waggoota shaniif nyaata isaaniirratti geggeeffames namoonni soorata kana fayyadaman rakkoo fayyaaf saaxilamaa turuu isaaniiti.
Namoonni soorata warshaa keessatti gulantaa hedduu keessa darbe sooratan carraan dhibee sirna dhiigaa fi onneen walqabatuun qabamuu isaanii namoota 100,000 keessaa 227dha. Kanneen muraasa sooratan ammoo 100,000 keessaa 242tu carraa dhibee kanaan qabamuu qabu jedhu qorattoonni.
Qorattoonni gorsa qabu.
Kanaafuu soorata warshaa keessa yeroo dheeraa turee ba'uu fi kan qabiyyeewwan hedduun itti dabalamuun qabiyyee uumamaa isaa keessaa fixan soorachuurra kanneen qabiyyee uumamaa qaban soorachuun akka barbaachisu gorsu qorattoonni kunneen.
Kuduraalee fi muduraalee, midhaan akka baaqilaa fi atarii, qurxummii, fi midhaan qabiyyee uumamaa qabu soorachuun akka barbaachisu eeran.
Fayyaa: Cireen soorata kaan caalaa qaamaaf barbaachisaa laata?
Viidiyoo Dhama nyaataa Addunyaa: Iguusii Naayijeeriyaa